Prepar3D FSX - mpiady
Fampidinana rehetra ho an'ny Prepar3D FSX - mpiady
Nohavaozina taminy 28-04-2019
Ity ny Boeing F / A-18c soavaly Prepar3D ka hatramin'ny v4 ary FSX, izany add-on izay nisolo tena asa lehibe avy amin'ny mpanoratra dia omena ao amin'ny Freeware (ny kalitao dia Payware).
Nosoratan'i 'Jimi' Hendrix, Jamal 'SpIns' Ingram, Corrado La Posta
Mitsubishi F-2 amin'ny version A sy B miaraka amin'ny cockpit virtoaly, kitapo feno nataon'ilay ekipa Japoney malaza FS KBT. Anisan'izany ny fiovan'ny 30, ny parachute, ny fitaovam-piadiana ary ny fijerena sarimihetsika fakan-tsary sy sary.
Nosoratan'ny ekipa FS KBT, Hiroaki Kubota
Miaramila MiG-23 FLOGGER an'ny Alphasim, nohavaozina FSX/P3D jiro vita amin'ny marika MDL X ary ny fitaovana. Ny fivarotana ivelany ivelany amin'ny fahitana fahitana mavesatra, afa-tsy ny fitokonana fitokonana: Droptank amin'ny fahazoana lanja amin'ny alàlan'ny mpikarakara ny karama
Tamin'ny alàlan'ny modely nataon'i Alphasim, FSX Fiovan'ny LLS
Amerika avaratra RA-5C Vigilante FSX & P3D
Nohavaozina taminy 02-02-2017
Complete add-on ny Vigilante any Amerika Avaratra RA-5C, FS2004 taloha avy any Alphasim izay lasa Freeware tamin'i Virtavia ary avy eo niova fo FSX / P3D by LLS
Nosoratan'i Alphasim (Virtavia) Navoakan'i LLS
mahafinaritra addon Fampandehanana maimaim-poana ny fonosan'ny F-4K / FG.1 Phantom Air Ground Attack Superiorty miaraka amin'ny repety maro. Ahitana repoblika 13 misy modely roa io fonosana io. Ny vokatra rehetra ary koa ny fanamafisana setroka dia tafiditra ao. Voasedra FSX / Acceleration ary Prepar3D. ao anatin'izany ny FDE, feo mahazatra, gauche, sary sns.
Amin'ny alàlan'ny Modely avy amin'ny IRIS Flight Simulation Software, fonosana nataon'i David Robles, VC avy amin'i Tim Conrad
mahafinaritra add-on miaraka amin'ny modely avo lenta, feo mahazatra, VC miaraka amin'ny valizy sy kofehy (tsy 2D tontonana), miaraka amina fitahirizana 3
Nosoratan'i Mohammad Faali
Nohavaozina taminy 25-11-2018
Famoahana ny version of Tornado F.3 avy amin'ny IRIS Simulation, feo vaovao, fanitsiana ny VC ary fanatsarana maro hafa (jereo readme). Manampy ny fiantraikany any aoriana, ny fampifanarahana Prepar3D v2 +.
Nataon'ny IRIS Flight Simulation Software
Fomba feno sy amin'ny antsipiriany add-on namboarin’i Roland Laborie (frantsay). Tany am-boalohany dia natao ho an'ny FS2004 saingy fisaorana an'i Danny Garnier namantsika fa mifanaraka tsara izao (port-over) izy io FSX or Prepar3D.
Nosoratan'i Laborie Roland, Laurent correia, Jean Pierre Langer, Jean Pierre Bourgeois, FSX fanavaozana nataon'i Danny Garnier
Nohavaozina taminy 22-01-2016
Dassault Mirage F1 Megapack. Izany no fonosana feno mampiasa ny mahafinaritra Mirage F1 amin'ny Kirk Olsson amin'ny nohavaozina VC amin'ny Danny Garnier. Dia ahitana ny modely sy ny liveries maro.
Avy amin'i Model: Kirk Olsson, fonosana Mega: Alex Guerreiro, fanavaozana VC: Danny Garnier
Avy amin'ny IRIS Flight Simulation Software - Repack nataon'i Alex Guerreiro
Complete add-on miaraka amin'ny refesina refesina, VC, tontonana 2d, feo, ref & checklist, famolavolana, vokatra manokana.
Io fonosana taloha no payware Saab Viggen J37 ny Virtavia / Alphasim izao misy toy ny freeware
Nosoratan'i Virtavia / Alphasim FSX P3D fanavaozana nataon'i Henk Schuitemaker
Io fonosana taloha no payware Crusader Alphasim / Virtavia izao misy toy ny freeware.
By Original avy amin'i Virtavia. Niova ho FSX teratany miaraka amin'ny fanavaozam-baovao avy amin'i Henk Schuitemaker. Mamaritra an'i Danny Garnier
Dia ahitana ny modely sy 6 11 textures. Ahitana ankehitriny cockpit virtoaly sy 2D tontonana. Koa ny fomba amam-panao feo, mahomby burner vokany, maro fihetsik'ireo sary mihetsika. Aza adino ny mamaky ny Handbook.pdf.
Add-on eo an-tampon'ny kalitao, fisitrihana tsara amin'ny simulation, takelaka sy modely maro ho an'ny F-15. Ampidirina ao amin'ity fonosana ity koa ny andiam-peo izay tena mahavariana. Azo henoina fa mandondona ny saron-tava ilay mpanamory. Aza hadino ny mamaky ny lisitra fanamarinana sy ny fanondroana.
Superbe avion de chasse avec plusieurs textures de Modèles. Qualité payware (payant) offert gratuit.
Nohavaozina taminy 01-11-2012
Eurofighter Typhoon fiaramanidina fiaramanidina kambana, maotera elatra, multirole ho an'ny FSX/P3D tena tsara!
Fampidinana: Pejy 1 amin'ny 2 Valiny 1 - 19 amin'ny 38